युग पाठकको बहुचर्चित पाठक–पत्र - म्यागेजिन - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
यसरी तयार भयो गुगलका लागि खुम्बुको दृश्य
सौरभ ढकाल - सन् २०१२ मा कीर्तिमानी सगरमाथा आरोही आप्पा शेर्पासहितको टोलीमा हिमाली पदयात्रामा हिँड्ने मौका जुर्‍यो । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मै एक सय दिन हामी उच्च पहाडी र हिमाली जिल्ला हिँड्यौँ। त्यसबेला हिमाली २२ जिल्लाका उत्तरी भुभाग घुमियो।
यस्तो छ पोकेमन गो क्रेज
- यसै साता रिलिज भएको 'पोकेमन गो' नामक भिडियो गेमले संसारको ध्यान खिचेको छ। भर्चुआलिटी र रियालिटीको गजबको मिश्रण यो गेममा देख्न सकिन्छ। गेमको अनौठो विशेषता भनेको खेलाडी वास्तविक स्थानहरुमा हिँड्दै खेल्नसक्छ।
यस्तो पत्र जहाँ पारिजातले लेखेकी छिन् आफ्नो पहिलो यौन अनुभवको नमीठो कथा
पारिजात - साहित्यकार पारिजातको प्रेम सम्बन्ध र यौन जीवनबारे बजारमा अनेक हल्ला–खल्ला चल्थे र चलिरहेका छन्। आफ्नो प्रेम सम्बन्ध र यौन–अनुभवबारे पारिजात आफैले चाहीँ के भनेकी छन् त? पढ्नुहोस्– डा. महेश मास्केलाई पारिजातले लेखेको दुर्लभ पत्र–
बाको चिन्ताले जन्मायो– गाउँमा सायद पहिरो गयो कि !
विप्लव प्रतीक - २०४० को दशकको समय हो। बुबाको पुरानो घर गौशालामा थियो। म पुल्चोकमा बस्थेँ। असार–साउनको महिनामा ठूलो पानी पर्दा, हावाहुरी चल्दा वा ठूलो चट्याङ पर्दा बुबालाई तलमाथि केही भयो कि भन्ने चिन्ता लागिरहन्थ्यो।